आर्थिक संकटले छोडेन भने आज मंगलबार गणेशजीको पूजा गर्दा जप्नुहोस् यी ११ मन्त्र। « Online Tv Nepal
Published : 17 March, 2020 4:54 pm
हिन्दू धर्म अनुसार भगवान श्री गणेशलाई सर्वश्रेष्ठ देवताको रुपमा मान्ने गरिन्छ । हरेक दिन सबैभन्दा पहिले गणेशजीको पूजा गरेपछि मात्र अन्य देवतालाई पूज्ने चलन रहिआएको छ । हात्तीको शिर तथा मान्छेको जस्तो शरीर र ठूलो भुँडी भएका भगवान गणेशलाई विघ्न हर्ता तथा सिद्धि दिने सिद्धि विनायकको रुपमा पूजा गर्ने गरिन्छ। मंगलबार भगवान गणेशको नाममा वर्त बस्ने र मन्दिर गएर विधिवत रुपमा गणेशजीको पूजा गर्ने गर्छन।
मंगल ग्रहलाई समस्याको निर्माता मानिने भएकाले यसको खराब प्रभावलाई जोगाउनको लागी पनि यस दिन वर्त बसी विधिवत रुपमा भगवान गणेशको पूजा आराधना गर्ने गरिएको हो । आज हामी तपाईहरुलाई भगवान गणेशको पूजा गर्दा जप्नुपर्ने केही मन्त्रहरु बताउन जाँदै छौँ जसबाट गणेशजी छिटो प्रसन्न हुने र उहाँको कृपाले जीवनमा सफलता मिल्ने गर्छ।
गणेशजीको पूजामा जप्नुपर्ने ११ मन्त्रहरु यी हुन् : १. श्री गणेशाय नम: २ – ॐ श्री गणेशाय नम: ३ – गं गणपतये नम: ४ – ॐ गं गणपतये नम: ५ – ॐ गं ॐ गणाधिपतये नम: ६ – ॐ सिद्धि विनायकाय नम: ७ – ॐ गजाननाय नम. ८ – ॐ एकदंताय नमो नम: ९ – ॐ लंबोदराय नम: १० – ॐ वक्रतुंडाय नमो नम: ११ – ॐ गणाध्यक्षाय नमः
सरकारले धेरै हिमालहरू आरोहणका लागि खुला गरे पनि भगवानहरूको शिर मानिने गौरीशंकर हिमाल आरोहणका लागि खुला गरेको छैन । समुद्र सतहबाट ३८४२ मिटर उचाइमा रहेको कालिञ्चोक भगवती मन्दिरको उत्तरतिर गौरीशंकर हिमाल आँखा अगाडि नै ठोकिन्छ । हिमालको एउटा टाकुरो भगवती पार्वती र अर्को टाकुरो भगवान शिवको स्वरूप भएकाले गौरीशंकर नामाकरण गरिएको हो ।
गुठी संस्थानबाट मूल पुजारीका रूपमा दुई वर्षदेखि काम गरिरहेका शान्तप्रसाद बस्यौला भन्छन्– यो ठाउँ धार्मिक हिसाबले जति महत्वपूर्ण छ, पर्यटकीय हिसाबले पनि उत्तिकै मनोरम छ । मन्दिरको संरक्षण र व्यवस्थापन अत्यावश्यक छ । १०८ वर्षदेखिका घण्ट सुरक्षित नै छन् भने त्यसअघिको शिलालेख कतै भटिएको छैन । तर देवीको पूजाआजाका लागि मान्छेहरू हजारांै वर्षदेखि आइरहने गरेको किंवदन्ती छ, कुरी बजारमा भेटिएका निमा शेर्पाले भने ।
युद्धबाट थाकेकी कालीदेवीका लागि प्यास लाग्दा पानी खान महादेवले ३८४२ मिटर उचाइमा रहेको डाँडामा तत्कालै पानीको व्यवस्था गरिदिए । पानीले भरिएको सात फिट गहिरो कुण्ड अहिले पनि छ । राक्षसहरूका राजा सम्बरको यो आदेशपछि लडाइँमा गएका राक्षसी सेनाले कालीदेवीमाथि आक्रमण सुरु गरे ।
कुण्डको उत्तरपूर्वबाट उत्पन्न भएको नदीलाई तामाकोसी भनिन्छ भने पश्चिमतिरको नदीलाई सुनकोसी । कालीदेवीको प्यास मेट्न भगवान महादेवले उनका लागि पानी खान बनाइएको कुण्डमा हजारांै भक्तहरूले दैनिक सयौं लिटर जल झिक्ने गर्छन् । राक्षसहरूको रक्तवीज परेको क्षेत्रमा कुनै बीउबिजन उम्रँदैन भन्ने किंवदन्ती अहिले पनि चलनमा छ ।
यसरी वर्षौं लडाइँ लडेर जितेपछि कालीदेवीले पुनः लडाइँ लड्न नपरोस्, मैले तपस्या गरेको ठाउँमा दुष्ट आत्माहरु आउन नसकुन भनेर कुण्डको पश्चिम भागमा पहाड काटेर निकै गहिरो गल्छी बनाई आउजाउ गर्न नसक्ने तुल्याएकी थिइन्, जहाँ अहिले फलामको भ¥याङ बनाएर आउजाउको व्यवस्था मिलाइएको छ । तर जति जल झिके पनि नसकिनु आश्चर्य लाग्दो यहाँको विशेषता हो मूल पुजारी शान्तप्रसाद बस्यौलाले भने ।
युद्ध सकिएको एक डेढ महिनापछि त्यो रक्तविजमा ठूल्ठूला किरा देखिन थालेछ, वरपरबाट आएकाहरूले देखेपछि कुरी, कुरी भन्दाभन्दै यसको नामै कुरी बजार रहन गएको हो, स्थानीय होटल व्यवसायी भोजबहादुर तामाङले भने । कुरी बजारमा अहिलेसम्म लसुन, प्याज, गेडागुडी उम्रेको देखिएको छैन । हजारांैले हात मुख धुन्छन् तर केही उम्रदैन ।